शुभ तिहार ! कसरी लगाउने भाइटीका ? – Ramjham Nepal
Home>>बिबिध/जानकारी>>शुभ तिहार ! कसरी लगाउने भाइटीका ?
Raju Aryal१ मंसिर २०७७, सोमबार ०६:१६ 223 Views0
मङ्सिर १ गते यस बर्षको यमपन्चक (तिहार) को अन्तिम दिन अर्थात भाइ टीका । यो चाडमा दाजुभाइलाई दिदिबहिनीले विधिपूर्वक पूजाआजा गर्ने, मिष्ठान,रोटी ,फलफूल आदि मनपर्ने कुरा ख्वाउने, दिदी बहिनीहरूलाई दान–दक्षिणा आदि दिने परम्परा छ। परापूर्वकालमा बहिनी यमुनाले यसै दिन आफ्नो दाजु यमराजलाई आफ्नो घर डाकेर विशेष मानसम्मान गर्दै भाइपूजा गरेको भन्ने भनाई छ। यमपञ्चकका पाँच दिन यमराजले यमुनाको घरमा बास गर्छन् भन्ने हाम्रो धार्मिक विश्वास छ। यी पाँच दिन इन्द्रादि दश दिक्पालले बलि राजाका लागि आफ्नो राज्य छाड्ने कथा पनि पाइन्छ। भाइ तिहारको दिन दियो, कलश र गणेशको पूजा गर्ने, यमराजको आह्वान गर्ने, बिमिरो, ओखर, तेल, मखमलीको माला, दूबोको टीका, कटुस आदिको प्रयोग गरि आफ्ना दिदी बहिनी र दाजुभाइको सुख,समृद्धि, अरोग्य एवं दीर्घायुको कामना गरिन्छ।
टीका लगाउनु अगाडिको विधि:-
दिदी–बहिनीले भाइटीकाभन्दा पहिल्यै नै दाजुभाइलाई निमन्त्रणा पठाउने चलन छ । यमपञ्चक शुरू हुनु अगावै दाजुभाइलाई भाइटीका ग्रहण गर्नका निमित्त पान,सुपारी, पत्र (आजकल त फोन,मेसेज आदि) पठाई निम्तो दिइन्छ । यस्तै भाइटीकाका दिन टीका ग्रहण नगरी केही खानु हुँदैन भन्ने मान्यता छ । टीकाको दिन बिहान सबैले नुहाइधुवाई गरि शुद्द वस्त्र धारण गरि बस्नुपर्दछ।त्यसपछी दिदिबहिनीले भक्ति र निष्ठापूर्वक अष्टचिरञ्जीवीको आवाहन गर्नुपर्दछ । अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम र मार्कण्डेय गरी आठ जनालाई अष्टचिरञ्जीवी भनिन्छ।
विशेषतः भाइटीकाको विधिपूर्वक पूजा गर्न ओखर, तोरीको तेल, बिमिरो, मसला, मखमली, दूबो तथा सयपत्रीको माला, रोटी, मिष्ठान्न आदि सामाग्री चाहिन्छ । पूजा–विधिमा सर्वप्रथम दिदिबहिनीले दियो, कलश र गणेशको पूजा गर्ने,यमराजको आह्वान गर्ने, बिमिरो, ओखर, तेल, मखमलीको माला, दूबोको टीका, कटुस आदिको प्रयोग गर्ने प्रचलनको लाक्षणिक एवम् प्रतीकात्मक अर्थ दिदीबहिनीले दाजुभाइको सुख,समृद्धि, आरोग्य एवं दीर्घायुको कामना गर्नु हो ।
टीका लगाउने विधि:-
भाइटीका लगाउनुपूर्व दिदिबहिनीले सबैभन्दा पहिले दियो, कलश तथा गणेश स्थापना गरी पूजा–अर्चना गरिन्छ । त्यसपछि दाजु–भाइको मंगल–माङ्गल्यको कामना गर्दै ढोकामा ओखर तथा अघि आव्हान गरुएका यमराजको पूजा गरी काल छेकिन्छ र ओखर फुटाइन्छ । त्यसपछि पानी तथा तेलले ७ घेरा हाली दाजुभाइलाई छेक्ने गरिन्छ।त्यसपछि क्रमशः फूल, अक्षता, अबिर, केशरी र चन्दन, लाभाले पूजा गरी दाजुभाइको शीरमा तेल लगाइदिएर सगुनस्वरूप दही खुवाउने गरिन्छ ।त्यसपछि दिदी–बहिनीले दाजुभाइको यश, आरोग्य, दीर्घायुष्यको कामना गर्दै निधारमा सप्तरङ्गी टीका लगाइदिन्छन् । सप्तरङ्गी टीकाको पनि आ–आफ्नै महिमा छ । रातो रङले सुख, नीलो रङले शान्ति, गुलाफी रङले समृद्धि, वैजनी रङले स्वास्थ्य, हरियो रङले दीर्घायु र पहेँलो रङ उल्लासको प्रतीक हुन् । त्यस्तै कतै कतै निधारको पुछारमा राता अक्षतासहितको टीका लगाइदिने चलन पनि छ।यसले उमंगको जनाउ दिने शास्त्रीय मान्यता छ ।टीका लगाइसकेपछि फूलको माला पहिर्‍ यई दिनुपर्छ । भाइटीकाका दिन दाजुभाइलाई लगाइदिने मखमली, सयपत्री तथा दूबोको मालाको आ–आफ्नै अर्थ र महत्त्व छ । मखमली कहिल्यै ओइलाउँदैन, सयपत्रीको रङ्ग कहिल्यै उडेर जाँदैन भने दूबो सधै हरिय रहन्छ । दाजुभाइप्रतिको प्रेम,सद्भाव रङ्गजस्तै गाढा तथा निरोगी भैरहने विश्वास स्वरूप ती माला प्रयोग गरिने शास्त्रीय मान्यता छ । टीकाको अन्तिममा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई ढाकाको टोपी लगाइदिँदै उँचो शीरको कामना गर्दछन् । दिदीबहिनीले टीका लगाउने क्रम सिद्धिएपछि दाजुभाइले पनि चेलीबेटीलाई टीका लगाएर गच्छेअनुसार दक्षिणा,उपहार आदि प्रदान गर्दछन् ।
दिदी–बहिनी नहुनेले के गर्ने ?
तिहारको टीका दाजुभाइ दिदीबहिनीबीच भ्रातृत्व र सहअस्तित्वको पर्व हो । अतः दाजुभाइ वा दिदीबहिनी नहुनेहरूले काठमाडौं रानीपोखरीस्थित मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्छन् । ७२ सालको भूकम्पमा रानीपोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिर भग्न बनेकाले विधिपूर्वक पूजा गर्ने अवस्था छैन । त्यहाँको मन्दिर छाउनीस्थित संग्रहालयमा राखिएको छ भने टीकाकै दिन ल्याइने र शुक्रबार अबेरसम्म राखिने गरेको मन्दिर संरक्षण समितिले जनाएको छ ।
भाइटीकालाई लामो समयसम्म भेटघाट नभएका दिदिबहिनीहरु दाजुभाइहरुसँग भेटघाट हुने, माया,प्रेम र सद्भाव कायम राख्नुका साथै सम्बन्धमा आएको चिसोपन हटाई मिलन गराउने तथा सम्बन्धलाई अझ दिगो बनाउने माध्यमका रूपमा लिइन्छ।
यसपाली भाइ टीकाको शुभसाइत मध्याह्न ११:३७ बजे रहेको,टीका लगाउदा दाजुभाइ पश्चिम र दिदिबहिनी पुर्व फर्केर टीका थाप्नु उत्तम हुने कुरा जानकारिमा आएको छ।